Like Valve (TIANJIN) Co., Ltd locates mu Tianjin - kupfuura guru upfumi kuchamhembe China. Kufanana vharafu ndiwo mukuru-kuguma vharafu zvinogadzirwa kugadzira kambani ine kutsvakurudza magadzirirwo kukura, kugadzira, yokutengesa minamato mune imwe. Tine Independent R & D pakati, yepamusoro kugadzira michina uye zvakasimba pakutevedzera akakodzera dzakawanda mitemo. With yemhando youinjiniya kugadzirwa nzira, zvakanaka kunyatsobudirira kugadzira midziyo, kuvhenekwa ongororo zvivako uye pfungwa dzakaonda kugadzira, isu "Kufanana Valve" nechokwadi kuti chikamu chimwe nechimwe chiri ose chigadzirwa isu Supply ari yepamusoro uye unongotaura.
Unhu vimbiso inobva kurapa zvose. Kubvira dzayo, kambani yave kushandisa kombiyuta-Ichibatsirwa design, akadai CAD uye mabasa Solid, uye vokutanga yokusuma yemhando Six Sigma utariri. Asimbiswa kuva kwokuoma yepamusoro utariri hurongwa, ramba To kuzoteverera razero urema zvigadzirwa. We dzidzira muna shavishavi vharafu, gedhi vharafu, pasi vharafu, cheki vharafu, bhora vharafu, hydraulic kudzora vharafu, vakadengezera vharafu nezvimwe akatevedzana zvigadzirwa. It unoberekawo kuvaka mavharuvhu dzakasiyana zvinhu, kumanikidzwa, ukuru nezvimwe zvigadzirwa, mune zvinopfuura 50 series, kupfuura 1,200 mhando.
Like Valve (Tianjin) Co., Ltd
yepamusoro vimbiso hurongwa
The wegore kugadzirwa kugona matani anopfuura 6,000. Products akafukidzwa mativi ose enyika uye aivigirwa kuEurope uye United States nedzimwe nyika, zvinowanzoshandiswa mvura uye abudise, kuvakwa, magetsi, petrochemical, metallurgia nezvimwe maindasitiri. Product unyanzvi, yepamusoro uye anonzwisisa mutengo, vachivimba neMweya user.
Tabuda ISO9001 dzakawanda unhu hurongwa advertising, Like Valve ane kwazvo makuru uye svikiro kadikidiki muchina kubudiswa midziyo 178 rinovira, 32 rinovira yokurohwa michina yabva kumwe. Product magadzirirwo yokufungidzira, yepamusoro mamiriro, wakanaka kugadzirwa michina, wakawondereiko kudai kugadzira, zvakakwana vasabatwa. The kudzora zvachose yepamusoro vimbiso maitiro uye basa gadziriro, tasvika wakakwirira pamwero design, budiriro, kugadzira uye kuongorora bvunzo. Strong kugadzirwa vanokwanisa anoita "Kufanana vharuvhu" iri pfupi inobvira nguva kupa zvigadzirwa, uye zvinopa Zvinoenderana Nenguva uye vakarongeka pashure-okutengesa basa kuti vawane kunonyanyisa vatengi kugutsikana.
Remangwana ichavakwa kubva nhasi, Like Valve vachava vomuzana kirasi mune zvesayenzi uye kugadzira utsanzi, chokutanga-kirasi basa, toop unhu entrepreneurial mweya kubatanidzwa yemberi pakusikwa. Tiine risanyatsobuda uye mutengi kugutsikana kuumba redu basa redu Company, With unremitting pakutsvaka uye kuramba kukura kupfuura isu. "Likv hope" achaita "Chinese hope" zvinonakidza!